ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် / ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ December 14, 2011 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် Leaveacomment 143 Views
လူးတား – ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ (U.N.F.C.) က ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တစ်ခုကို ထူထောင်မည်ဟု သိရ၍ စိတ်ဝယ်ပီတိ ဂွမ်းဆီထိပမာ ဝမ်းသာမိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ယခုအခါ၌ ပြည်ထောင်စုတပ် အသွင်မဆောင်တော့ဘဲ တပြည်ထောင်တပ်ဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းအသိဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈-ဥပဒေတွင် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အရပ်သားအစိုးရက လုံးဝနီးပါး စွက်ဖက်၍ မရသကဲ့သို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တပ်က ဦးဆောင်ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခွင့်ပေးထားရာ တပ်မတော်သည် ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းတပ်မတော် ဖြစ်ရချေသည်။ ဤအခြေအနေတွင် U.N.F.C. အဖွဲ့ကြီးက စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်ရန်အကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ရသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်သည် မြန်မာပြည်၏ လွတ်လပ်ရေးကို မောင်ပိုင်လုပ်ကာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကို မထီမဲ့မြင်ပြုရုံမျှမက ညီအကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ရန်သူသဖွယ် တိုက်ခိုက်လျှက် ရှိသည်။ မြန်မာလူမျိုး၏ အကျိုးစီးပွားမျှကိုသာ အာရုံထား၍ မြန်မာမှုပြုကာ အရှေ့တောင်အာရှတွင် မြန်မာ့ဦးစွန်းကို ပြန်လည်ရယူမည်ဟု အားခဲသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တိုင်းရင်းသားညီနောင်များကို ကိုယ်စားမပြုတော့ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့် စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တစ်ခု ရှိသင့်သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ပင်လုံစာချုပ်ကို မေ့ပျောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ရန်သူဟု သဘောထား၍ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းကြောင်း အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်များသည် လွတ်လပ်ရေးမရမီ ဗြိတိသျှတို့နှင့် ဆွေးနွေးချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အရေးကို အလေးထားသယောင် ဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့ကြသည်။ ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုသောအခါ လူမျိုးနှင့်နယ်မြေကို အဓိကထား၍ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်ကြာသောအခါ မြန်မာ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာလူဦးရေကို ရှေ့တန်းတင်ကာ လူဦးရေနည်းပါးသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို အသာစီးရယူပြီး အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားများဘဝကို ရယူခဲ့ကြသည်။ မြန်မာလူဦးရေ အားကောင်းမှုကို အခွင့်ကောင်း ရယူကာ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများကို မတရားသိမ်းပိုက်ကြသည်၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ရှိသည့် သယံဇာတများကိုလည်း မြန်မာပိုင်လုပ်ကာ ထင်တိုင်း အလိုရှိတိုင်း တံခါးမရှိဓားမရှိ ထုတ်ယူသုံးစွဲကြသည်၊ မြန်မာစာကိုသာ ရုံးသုံးဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများကို အားပေးရမည့်အစား သေးသိမ်ပျောက်ကွယ်သွားအောင် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လာကြသည်ကို အထင်အရှား တွေ့မြင်လာရသည်။ ဤအခြေအနေဆိုးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြည်ထောင်စုကြီးကို ကယ်တင်ရန် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တစ်ခု လိုအပ်သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကျောထောက်နောက်ခံပြုမှုဖြင့် အာဏာရလာသော အရပ်သားအမည်ခံ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် ရိုးသားမှုကို မပြဘဲ စနစ်တကျဖြင့် သပ်လျှိုဖြိုခွဲရေး၊ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးကိုသာ အကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် စကားပြောရာတွင် သီးခြားတွေ့ဆုံလေ့ရှိသည်။ U.N.F.C. က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုကြောင်းသက်သေပြလိုသဖြင့် ဝ နှင့် ကိုးကန့် တပ်နှင့် အပစ်ရပ်ခဲ့သည်။ တစုတဝေးဖြင့် စကားပြောချင်ပါသည်၊ လူမျိုးတန်းတူရေးအတွက် စကားပြောချင်ပါသည်၊ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးမှာ အာသာချင်း တူညီကြပါသည်ဟု ပြောသော်လည်း မကြားချင်ဟန်ဆောင်၍ သူ့ပေါ်လစီအတိုင်းသာ သွားနေသည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နိုင်ငံရေးဖိအားပေးရန် လိုအပ်သည်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များကို မတူညီသည့်အခွင့်အရေးများ ပေးခြင်း၊ မတူညီသည့် ဖိအားများကို ပေးခြင်း၊ အချိန်သတ်မှတ်ချက် မရှိသည့် ဆွေးနွေးပွဲကို ကမ်းလှမ်းခြင်းတို့မှာ မရိုးသားလွန်းရာ ရောက်နေ၍ ယင်းကို တုန့်ပြန်သောအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကို ဖွဲ့စည်းရဟန်ရှိသည်။
ပို၍ ထူးခြားသည်မှာ သိန်းစိန်အစိုးရနှင့် မကြေညာရသေးသည့် အပေးအယူများ ရှိသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကို လွှတ်တော်တွင် ပုံဖော်မည့် မဟာဗျူဟာသစ်ကို ကျင့်သုံးလာသည်။ ဤအချက်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ရင်ဖွင့်သံ မကြားရသော်လည်း ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကကဲ့သို့ အပစ်ရပ်တကျော့ပြန်အဖြစ် သဘောထားပုံရသည်။ N.L.D. နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို စည်းခြားလိုသည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ နည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်၏ ချဉ်းကပ်မှုသည် လောလောဆယ်တွင် အတိုက်အခံများနှင့် ပြည်ပခေါင်းဆောင်အချို့၏ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ရရှိသော်လည်း လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ သံသယပွားမှုကိုသာ ခံနေရသည်။
N.L.D. ပါတီသည် ရှစ်လေးလုံးမှ ပေါက်ဖွားလာသည့် အတိုက်အခံပါတီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက် လိုအပ်၍ ပေါ်ပေါက်လာရသည်။ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ယုံကြည်သောပါတီတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများသည် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့် လူမျိုးတန်းတူရေးကို မရနိုင်၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖြင့်သာ ရနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် N.L.D. နှင့် U.N.F.C. သည် ဘဝချင်းတူသော်လည်း ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ပုံကိုင်ပုံမတူသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ N.L.D. အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အင်အားကို ရယူလိုပါမူ ရွေးကောက်ဝင်မဝင်သည့် လက်နက်မကိုင် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို ချဉ်းကပ်ရုံဖြင့် ကိစ္စပြီးမြောက် လိုရာရောက်နိုင်သည်။ N.L.D. ပါတီသည် လွှတ်တော်တိုက်ပွဲအတွက် U.N.F.C. အင်အားကို ရယူရန် မလိုပေ။ U.N.F.C. က ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကို ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လွှတ်တော်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကို ထိခိုက်စေမည်လည်း မဟုတ်ပေ။
N.L.D. ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် သိန်းစိန်အစိုးရကြား ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဖြင့်သာ ကူညီလိုရင်းရှိပုံကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည့် N.L.D. ပါတီ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို U.N.F.C. က စောင့်ကြည့်ခွင့်၊ လေ့လာခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်လူမျိုးများသည် ကိုယ်ပိုင်တပ်များ ရှိသဖြင့် N.L.D. ကဲ့သို့ လွှတ်တော်ထဲ တိုး၍ နိုင်ငံရေးလုပ်ရန် မလို၊ လွတ်တော်ဝင်ရန် ဒီမိုကရေစီရေး ရရန် အဓိကထား၍ တိုက်ပွဲဝင်နေသူများမဟုတ်ဘဲ လူမျိုးတန်းတူရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူများဖြစ်ရာ လွှတ်တော်က လူမျိုးတန်းတူရေးဥပဒေ မပြုမချင်း ဆက်လက်၍ တိုက်ပွဲဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းတိုက်ပွဲကို အရှိန်ကောင်းအောင် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်က များစွာ ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်သည် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ လူမဆန်သော အပြုအမူများကို အတုမခိုးမိရန်၊ ယင်းတို့၏ ဖက်ဆစ်ဆန်သော စစ်တိုက်နည်းကို အသုံးမပြုမိရန်၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရန်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး သဘောတူသည့် ဘာသာရပ်ကို ရုံးသုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်၊ ဖက်ဒရယ် စစ်ခုံရုံးထားရှိရန်၊ ဒီမိုကရေစီရေး လူ့အခွင့်အရေး လူမျိုးတန်းတူရေးကို တပ်မတော်တွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ စစ်ဦးစီးချုပ်ကို လူမျိုးစုတပ်များ၏ ဦးစီးများအား တင်မြှောက်ရန် အစရှိသည်တို့ကို အစမ်း လေ့ကျင့်သင့်ပေသည်။ အင်အားနည်းသော်လည်း ပုံစံဝင်အောင် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်သွားသင့်သည်။
တိုက်ရေးခိုက်ရေးကိစ္စများတွင် ပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့များက ယင်းတို့၏ ဒေသအလိုက် လှုပ်ရှားပြီး အင်အားနည်းသေးသော ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကို စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးအစရှိသော ပေါ့ပါးသည့်တာဝန်များတွင် ချထားထမ်းဆောင်စေသင့်သည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် လူဦးရေအရ အင်အားကြီးသော်လည်း ပြည်ထောင်စုတွင် မှီတင်းနေထိုင်သော ညီနောင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အနည်းတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်ဟု ခံယူသည့် ဗမာ့တပ်မတော်တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာလျှင် များစွာ ထိရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ABSDF ကို ဗမာ့တပ်မတော်အဖြစ် ပါဝင်စေပြီး ပြည်ပအတိုက်အခံများသည် ဗမာပြည်နယ်အစိုးရအဖြစ်ဖြင့် ဤ U.N.F.C.တွင် ပါဝင်လာနိုင်လျှင် ရွှေပေါ်မြတင်သကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် တင့်တယ်မည်မှာ သေချာလှသည်။
မှတ်ချက်။ ။ စာရေးသူ၏ အာဘော်မျှသာ ဖြစ်သည်။
Previous ထိုင်းပြန် မွန်လူမျိုးအလုပ်သမားများ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုနှင့် ကြုံနေရ
Next ဘုရားသုံးဆူ-သံဖြူဇရပ် ကားလမ်း ဂိတ်ကြေးကြီးမြင့်မှုကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းများစျေးတက်